केहि समय अघिमात्र कोरियाकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति बनेका इ जे योङ किन जे’ल परे? – Eps Sathi
केहि समय अघिमात्र कोरियाकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति बनेका इ जे योङ किन जे’ल परे?
May 16, 2021 761
इ जे योङ कोरियाको सामसङ घरानाका एक सदस्य हुन। उनका पिता लि कु हे ले सामसङ कम्पनीमा लामो समय चेयरम्यानका रुपमा रहे। उनका पिता सन २०२० अक्टोबरमा बितेका थिए। बित्ने समयमा उनको सम्पति २० बिलियन अमेरिकी डलर बराबर थियो। उनको मृ’त्युपछि आधा सम्पति क’रका रुपमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने भयो। दक्षिण कोरियामा आफ्ना बाबुआमाको सम्पति आफ्ना छोराछोरीमा जाँदा ५० प्रतिशत क’र राज्यलाई तिर्नुपर्ने नि’यम छ।
इ जे योङ उनका पिताका एकमात्र छोरा हुन। उनको पिताको सम्पतिबाट उनले करिब करिब ७ बिलियन डलर पाएका छन। यो ७ बिलियन डलर थपिएपछि भरखरै उनि दक्षिण कोरियाको सबैभन्दा धनी व्यक्ति पनि बन्न सफल भए। तर दु’र्भाग्य उनले यो सम्पति प्रयोग गर्न अहिले पाउँदैनन किनभने उनि अहिले जे’लमा छन।
कोरियाकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति आखिरी किन जे’लमा छन त? सबैको जिज्ञासाको विषय हुन सक्दछ। यो एउटा लामै कथा छ। उनि दक्षिण कोरियाका भूतपूर्व राष्ट्रपतिसँगै भ्र’ष्टचारको मु’द्दामा मु’छिएका छन। उनलाई सन २०१५ मा त्यसबेलाका राष्ट्रपति पार्क ग्युन हेलाई ३८ मिलियन डलर बराबरको घू’स दिएको आ’रोप छ। घु’ष दिई राज्यबाट आफ्नो कम्पनी सामसङका लागि उपयोगी सुविधाहरु लिएको बताइएको छ। उनलाई सन २०१७ फेब्रुअरी १६ मा प्र’हरीले प’क्राउ गर्यो। उनलाई घु’ष दिएको र भ्र’ष्टा’चार गरेको आ’रोपमा २२ घण्टा अ’न्तरवार्ता लिइयो।
जब यो घु’ष का’ण्ड बा’हिरियो दक्षिण कोरियाली जनताले यसको ति’ब्र वि’रोध गरे। जनताको बि’रोधका सामु कसैको केहि लागेन र त्यस बेलाका राष्ट्रपति पार्क राष्ट्रपति पदबाट प’दच्यु’त समेत भइन। उनलाई भ्र’ष्टाचा’र र पदको दु’रुपयो’ग गरेको आ’रोपमा २५ बर्ष जे’ल स’जाय सुनाइयो। इ जे योङलाई पनि विदेशमा सम्पति लु’काएको, घु’ष दिएको अ’भियोगमा सन २०१७ मा ५ बर्षको जे’ल स’जाय दिइयो। सन २०१८ मा उनको स’जाय घटाएर २ बर्ष ६ महिनामा झा’रियो। उनले त्यो समय कटाएर जे’लमुक्त भए।
तर दु’र्भा’ग्य सन २०१९ को अगष्टमा कोरियाको स’र्वोच्च अ’दालतले उनको जे’ल स’जा’यलाई उ’ल्ट्याई के’श पुन अघी बढायो। सन २०२१ को जनवरीमा उनलाई साँढे २ बर्षको जे’ल स’जा’य सुनाईयो। उनि अहिले यहि स’जाय का’टिरहेका छन। उनि अहिले सउलमा रहेको जे’लमा छन।
Prevनेपालले कामदार निर्यात गर्ने कोरियामा भिण्डी निर्यात गर्दै फिलिपिन्स
Nextकोरियन युवामा नयाँ ट्रेण्ड, फूल र चकलेटको सट्टा आफ्ना प्रेमीलाई कम्पनीको सेयर उपहार